Madaxweynaha Turkiga: "Fasax kama qaadaneyno Mareykanka si aan u howlgelinyo Gantaalaha difaaca Cirka" | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan si cad u sheegay in Turkigu uu bilaabay tijaabinta Gantaalaha difaaca cirka casriga ah ee S-400 oo Ruushku sameeyo, isagoo iska dhega tiray digniin ka timid Mareykanka.
“Tijaabada Nidamka S-400 waa la qaaday, waana la sii wadayaa. Mowqifka Mareykanka gabi ahaan nama khuseeyo. Haddii aynaan tijaabin doonin awoodahan aan haysanno, markaa maxaan sameyneynaa?” ayuu yiri Erdogan oo ku gacan seyray diidmada Mareykanka.
Wasaaradda Difaaca Mareykanka ayaa saacado ka dib hadalka Erdogan waxa ay bixisay jawaab erayo adag lagu qoray, iyadoo ku dhowaatay in ay ku eedeyso Turkiga inuu khiyaamayo xulafada NATO.
Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay inaysan fasax ka rabin si ay u howlgeliyaan Hubkooda iyo Gantaalaha Difaaca Cirka ee S-400, ayna kaliya tijaabo ku wadin Gantalaha ee ay tijaabinayaan hub kala duwan.
Giriiga ayuu sheegay inu heysto Gantaalaha Difaaca cirka ee S-300 oo Ruushku sameeyo, isla markaan anuu fahmi karin sababta uu Mareykanka raaliga uga yahay, ugana aamusay, balse u diidan yahay Hubka Turkiga soo iibsaday ee uu tijaabinayo oo uu ku jiro S-400.
Previous articleJid muddo Sanado ah u xirnaa Safaarado oo la bilaabay in Dhagxaanta iyo Shubka laga qaado
Next articleFaransiiska oo u yeertay Safiirkii u joogay Turkiga, kadib hadal kulul oo kasoo yeeray Madaxweynaha Turkiga